LOVE Archives - Page2of3- XYZ NEWS
သင့်ကို တန်ဖိုးထား၊ မထား ဆိုတာသိနိုင်တဲ့ သင့်လက်တွဲဖော်ရဲ့အပြုအမူများ
ချစ်တယ်လို့ပြောတာကတယောက်ယောက်ကိုဂရုစိုက်တယ်ဆိုတာပြောပြဖို့အလွယ်ဆုံးနည်းဖြစ်ပေမယ့်အဲဒီတနည်းပဲရှိတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ခံစားချက်တွေဖော်ပြတာကတယောက်နဲ့တယောက်မတူပါဘူး။တချို့ကစကားလုံးတွေသုံးပြီးတချို့ကအပြုအမူနဲ့ပြပါတယ်။သင့်ရဲ့လက်တွဲဖော်ကသင့်ကိုလုပ်ပြတဲ့အပြုအမူတွေကဒေါသထွက်စရာစိတ်ပျက်စရာတွေလဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ BrightSideကသင့်ချစ်ရတဲ့လူတွေလုပ်ပြတဲ့အပြုအမူတွေကဘာကိုဆိုလိုလဲဆိုတာပြောစရာမလိုအောင်သိဖို့နည်း ၆နည်းကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ ၁။သင်ပြောတာတွေကိုကိုယ်ပိုင်ဒိုင်ယာရီလိုနားထောင်တယ်။ သင့်ရဲ့လက်တွဲဖော်ကသင့်ပြောတဲ့ပျေါ်စရာကော၊ဝမ်းနည်းစရာကောကိုနားထောင်ပြီးနှစ်သိမ့်ပေးတတ်တယ်ဆိုရင်၊သူတို့ကနားထောင်ပေးရုံတင်မဟုတ်ဘဲသင့်တို့ဆက်ဆံရေးရဲ့ယုံကြည်မှုကိုပါတန်ဖိုးထားနေတယ်လို့ပြတာပါ။သင့်ရဲ့လက်တွဲဖော်ဆက်ဆံရေးကိုပိုခိုင်မာပြီးရိုးသားမှုရှိလာအောင်လုပ်နေတာပါ။ ၂။သင့်ရဲ့အချွဲအနွဲ့တွေကိုကြိုက်တယ်။ သင်ချစ်မိသွားတဲ့အခါမှာချွဲနွဲ့ရတာလဲဆက်ဆံရေးတခုမှာပျော်စရာပါပဲ။သင့်လက်တွဲဖော်ကသင့်ကိုချွဲရတာကြိုက်တယ်ဆိုရင်သင်နဲ့ရှိနေတဲ့အချိန်ကိုပိုကောင်းစေချင်ပြီးတန်ဖိုးထားတယ်ဆိုတဲ့သဘောပါ။အဲဒါတင်မကပါဘူး။နဖူးကိုနမ်းခြင်းနဲ့အနောက်ကသိုင်းဖက်ခြင်းတွေကစကားလုံးတွေမပါဘဲသင်ကအရေးကြီးကြောင်းကိုပြနေတာပါ။ ၃။သင့်ရည်မှန်းချက်တွေအောင်မြင်အောင်တွန်းအားပေးတယ်။ ဆက်ဆံရေးတခုဆိုတာကသင်တို့အချိန်တွေထပ်တူကျတာမဟုတ်သလိုတနေကုန်စာပို့နေလို့လဲမရပါဘူး။နေ့တနေ့ကုန်သွားရင်မတူတဲ့ရည်မှန်းချက်နဲ့အိမ်မက်တွေအတွက်ရှင်သန်ကြတာပါ။သင့်လက်တွဲဖော်ကအိမ်မက်တွေအောင်မြင်ဖို့တွန်းအားပေးပြီးသူ့ကိုအာရုံမစိုက်တာကိုအထွန့်မတက်ဘူးဆိုရင်တော့သူကသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အချိန်ကိုတန်ဖိုးထားတာပါ။သင့်ရဲ့လက်တွဲဖော်မှာလဲသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အိမ်မက်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့အခွင့်အရေးရှိတာကိုနားလည်ခြင်းကရင့်ကျက်မှုနဲ့အချစ်စစ်ပါပဲ။ ၄။သင့်ကိုအိမ်မှာကူညီတယ်။ သင့်လက်တွဲဖော်ကအဝတ်လျှော်တာနဲ့တခြားအိမ်အလုပ်တွေကိုလုပ်ရတာမညည်းညူဘူးဆိုရင်သင့်ကိုတူညီတဲ့တန်ဖိုးရှိတယ်လို့သဘောထားပြီးမျှဝေခံစားတာပါ။ဆက်ဆံရေးတခုမှာသာတူညီမျှစိတ်ရှိတဲ့သူကိုရှာဖို့အရမ်းခက်တဲ့အတွက်အဲလိုလူကိုတွေ့ရင်လက်မလွှတ်ပါနဲ့။ ၅။သူတို့ချစ်ရတဲ့တခြားလူတွေကိုသင့်အကြောင်းပြောဖို့ဝန်မလေးဘူး။ အရှင်းဆုံးလက္ခဏာကတော့သင့်လက်တွဲဖော်ကမိသားစုနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေကိုသင့်အကြောင်းမဖုံးထားတာပါပဲ။သင်တို့ပတ်သတ်မှုအကြောင်းတခြားသူကိုပြောဖို့ဝန်မလေးဘူးဆိုရင်တော့သူတို့ကသင်နဲ့ထားတဲ့ကတ်တွေကိုတန်ဖိုးထားတယ်ဆိုတာနဲ့အနာဂတ်ကိုသင်နဲ့သွားမယ်လို့ဆိုလိုတာပါ။ ၆။သင်တို့နှစ်ယောက်အပြင်သွားတဲ့အချိန်တိုင်းလက်ချိတ်ထားတယ်။ လူကြားထဲမှာတောင်လက်ချိတ်သွားနေတာကလဲအဆင်ပြေပါတယ်။အဲဒါကိုအနီကတ်လို့သဘောထားရင်ရပါပြီ။သင်တို့နှစ်ယောက်ပတ်သတ်နေတယ်ဆိုတာတခြားသူတွေကိုပြနေတာပါ။အဲဒါကြောင့်လူကြားထဲမှာတောင်သင်နဲ့ခပ်ခွာခွာမနေနိုင်ဖြစ်နေတာပါ။ Writer -Min Thu ( XYZ …
February 19, 2020 By Editor LOVE
သင့်ချစ်သူက သင့်ကို အရူးအမူးချစ်နေကြောင်း သိနိုင်တဲ့အချက်များ
1- Beauty and the Beast သူတို့နှစ်ယောက်ကတော့ အသက် ၃၇ နှစ်အရွယ် Bumi Kantha နဲ့ အသက် ၂၃ နှစ်အရွယ် Phatso Rob Mack တို့ဖြစ်ကြပြီးထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကရွာလေးတစ်ရွာမှာနေထိုင်ကြပါတယ်။Bumi ဟာ …
ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်ဟာ ကုသခြင်းထက်ကောင်းတယ်ဆိုတာကြားဖူးပါလိမ့်မယ်။ စုံတွဲတွေမှာ များသော အားဖြင့် တစ်ယောက်ကထိခိုက်လွယ်တတ်ပြီး အဲ့ဒီအတွက်သင်ပြင်ဆင်ထားသင့်တဲ့အရာတွေကို မြင်နိုင်အောင်ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ အဆင့် ၁ : လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်အချစ် သင့်ရဲ့နံရိုးလေးကို ရရှိလိုက်တဲ့ခဏလေးအတွင်းမှာ အားလုံးဟာ ပျားရည်လိုချိုမြနေတယ်။ ချစ်သူလေးကိုတွေ့လိုက်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာ လိပ်ပြာလေးတွေဝဲနေပြီး အနမ်းလေးတွေ၊ အထိအတွေ့လေးတွေအကုန်လုံးဟာ …
လေ့လာချက်များစွာအရ ပျော်ရွင်သော ဆက်ဆံရေး၊အိမ်ထောင်ရေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားသော စုံတွဲများအနေနဲ့ ပိုမိုဝိတ်တက်ကြောင်းသိရပြီး ထိုအတွက် သက်သေပြချက်များလဲ ရှိပါတယ်။ -အမေရိကန်နိုင်ငံ North Carolina တက္ကသိုလ်ရဲ့ သုတေသနအဖွဲ့က စုံတွဲပေါင်း၈၀၀၀ကျော်ကို ကိုယ်အလေးချိန်တိုင်းပြီး လေ့လာရာမှာ လက်ထပ်ပြီးအမျိူးသမီးတစ်ယောက်သည် လက်ထပ်ပြီး ၅နှစ်ကနေ၆နှစ်အတွင်း …
၁။ တခြားရွေးချယ်စရာမရှိလို့ ဒီအကြောင်းပြချက်ကို သုံးတဲ. သူများကတော့သူတို့ကိုယ်တိုင် မထိန်းချုပ်နိုင်သော ဆန္ဒအရဖြောက်ပြန်ပြီး မတက်သာလို့ပါဟု တစ်ဖက်လူကိုရော ကိုယ်တိုင် ရော ချွေးသိပ်ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၂။ အောက်စီတိုစင် ဓာတ် လျော့ပါးရခြင်း အောက်စီတိုစင်ဓာတ်ဆိုသည် မှာ ဖိုမ …
နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၄ ရက်နေ့မှာ အမေရိကန် နဲ့ အခြားသောနိုင်ငံတွေမှာ ချစ်ခင်ရသူတွေအချင်းချင်း သကြားလုံးတွေ ချောကလက်တွေ ပန်းစည်းတွေ ပေးကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီ Valentine Day ရဲ့ အဓိပါ္ပယ်က ဘာလဲ ? …
သင့်မှာ လှပထူးချွန်ထက်မြက်ပြီး မိန်းကလေးချင်းတောင်အားကျရတဲ့ သူငယ်ချင်းမျိူးရှိပါလိမ့်မယ်။သူမအနေနဲ့ အချစ်ရေးအဆင်မပြေတာမျိူး၊အိမ်ထောင်ဖက်နဲ့အဆင်မပြေတာမျိူးကြောင့် စိတ်ညစ်နေရတဲ့အခါ သင်အံ့သြမိပါလိမ့်မယ်။အရာရာပြည့်စုံသော်လည်း သူ့ကောင်လေးနဲ့သူဘာလို့အဆင်မပြေရပါလိမ့်။ယောကျ်ားလေးတွေရင်ဖွင့်ထားတဲ့ သူတို့ချစ်သူကောင်မလေးများအပေါ် စိတ်ပျက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကို စုစည်းတင်ပြလိုက်ပါတယ်။ (၁)အမြဲစိတ်ညစ်နေတတ်သောမိန်းကလေး မဂ္ဂဇင်းတစ်ခုရဲ့ ကာဗာမှာ ရုပ်တည်တည်နဲ့ ဆက်ဆီကျနေသော မိန်းကလေးမျိူးထက် ပြုံးရယ်နေသော မိန်းကလေးမျိူးကို ပိုသဘောကျတတ်ကြသလိုမျိူးပဲ …
1)သူတို့မှာ အနားယူဖို့ ကိုယ်ပိုင်အချိန်သီးသန့်လိုအပ်ပါတယ် အမျိုးသားတွေဟာ ဦးဆောင်နေရခြင်း၊ဆုံးဖြတ်ချက်ချရခြင်း၊တာဝန်ယူနေရခြင်းတွေကို အချိန်ပြည့်လုပ်နေရတာ ငြီးငွေ့နေပါတယ်။ထို့ကြောငိ့ သူတို့မှာလဲ သက်တောင့်သက်တာဖြစ်ဖို့ ကိုယ်ပိုင်အချိန်လိုအပ်ပါတယ်။ (2)အသေးအဖွဲကိစ္စများကို ခေါင်းထဲ မထည့်ဘူး သူတို့အတွေးက ကျယ်ပြန့်ပါတယ်။ဒါကြောင့် သင်ပြောသမျှ အသေးစိတ်တွေကိုသူတို့ ဂရုမစိုက်နိုငိပါဘူး။ဒါမို့ အသေးအဖွဲအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး သူတို့ကိုမရစ်ပါနဲ့။ပြောရရင် …